Uyaveva onqatshelwa ukondla ingane 'yakhe' | News24
Uyaveva onqatshelwa ukondla ingane 'yakhe'
Durban - Uyavutha yintukuthelo owesilisa waseShowe enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal osola owesifazane obeshade nesiqumama esingumphathi wesitebele somculo sodumo, iMabala Noise, uReggie Nkabinde ngokunqwaha nengane athi ngeyakhe lona wesifazane umtshele ukuthi ibiza uNkabinde ngoba wehlukanise nalesi sikhulu kodwa wangasishintsha isibongo.
UMnu Sandile Masuku ukhala ngokuvinjelwa nguNkz Zandile Makhanya-Nkabinde - obeshade noMnu Nkabinde obuye abe nguMgcinimafa Jikelele we-ANCYL - ukubona nokondla le ngane enamasonto izelwe, athi ngeyakhe.
Uthi uMakhanya-Nkabinde ukhulelwe esemlobolile, sekusele ukuba ziwushaye phakathi kwabo futhi sebehlala ndawonye emzini kaMakhanya-Nkabinde oseMhlanga.
Utshele iphephandaba ILANGA ukuthi emuva kokukhulelwa kwakhe babe nokungaboni ngasolinye, bagcina sebehlukene, okuthe ingane isizelwe uMakhanya-Nkabinde wangabe esafuna ukuba asondele kuyona, wanqaba nokuba ayondle.
"Le ngane uma eyifake ezithombeni zeWhatsApp, ngiyayibona nje ukuthi ngeyami, ifana nezinye izingane zami. Uma ngimcela kahle ukuba ngiyoyibona, uvele abhoke ngolaka athi ngihlangana kuphi nengane ngoba ngeyakwaNkabinde futhi iyondliwa, akadinge lutho lwami.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe abangu-20 ababalekela ukondla
"Ungesabisa nangokuthi bazongibopha. Uma ngithi masenze ulibofuzo ukuze ngimyeke nami ngikhululekile ngazi ukuthi ingane kakusiyona eyami, uyanqaba.
"Kade ngithumele abafowethu emzini wakhe ngithi mabayokhuluma naye ngalolu daba kodwa uvele wacasha ekamelweni, bamphika ekhona bathi useGoli.
"Kangifuni ukuba yisiphazamiso empilweni yakhe njengoba nami sengiqhubekile neyami kodwa ngidinga ingane yami nje kwaphela. Mina ngeke ngihlulwe wukondla amathumbu ami," kusho uMasuku.
Ethintwa uMakhanya-Nkabinde, uvumile ukuthi unayo ingane encane kodwa akanaso isiqiniseko sokuthi ngekaMasuku. Uma ngibala kuyaphambana futhi-ke ngisakhulelwe ubengihlukumeza, engichamela, angigwilizise emanzini. Umuntu okwenza izinto ezinje ungasho kanjani ukuthi unguyise wengane yakho?"